IOS 7 miadana amin'ny iPhone 4? Andramo ity fika | Vaovao IPhone
Mpampiasa maro manana a iPhone 4 diso fanantenana tanteraka izy ireo tamin'ny fampisehoana ny tsimbadika voalohany an'ny iOS 7 ho an'ny tobiny.
Ny olana malaza indrindra dia ny fitendry virtoaly hita eo amin'ny efijery, ka miteraka ny valiny dia 5 ka hatramin'ny 15 segondra amin'ny tranga matotra indrindra. Misy fiantraikany amin'ny rindranasa rehetra izay tokony hanoratanao (izay tsy vitsy), noho izany, Apple dia tsy maintsy nandinika an'io olana io mba hamahana azy haingana araka izay tratra.
Eo am-piandrasana ny fahatongavan'ity fanavaozana ity, mpampiasa maro no afaka nanamarina fa ny olan'ny valiny fitendry virtoaly dia voavaha tamin'ny fikafika tsotra. Mila mandeha fotsiny amin'ny menio Settings ianao, miditra amin'ny fizarana iCloud ary alefaso ny safidy "Documents and data".
Ireo olona nanandrana an'io fomba io faly be izy amin'ny vokatr'izany satria ny iPhone 4-nao dia lasa terminal tsy ilaina intsony ka mandeha amin'ny fomba mahazatra. Mazava fa tsy ny iPhone 4 no lesoka fa ny iOS 7 fa hey, eo am-piandohan'ny fiainany isika ary ara-dalàna ny tsy fahombiazana hanjavona amin'ny herinandro ho avy.
Aza adino, tadidio fa ny iPhone 4 Io no terminal tranainy indrindra afaka mametraka iOS 7 ary, noho izany, ny fitaovany finday dia voafetra ihany mba hamindra ny rafitra miaraka amin'ilay tsiranoka natolony tamin'ny kinova teo aloha. Fantatr'ity Apple ity ary izany no antony tsy maintsy hamonoana ny maro amin'ireo asan'ny iOS 7 amin'ity maodely ity, vidiny iray tsy maintsy aloa vao afaka mankafy fanavaozana iray taona fanampiny.
Fanazavana fanampiny - iWork, iMovie ary iPhoto maimaim-poana, ny lakileny amin'ny fampidinana azy io nefa tsy mandoa
Loharano - Softpedia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » IOS 7 miadana amin'ny iPhone 4? Andramo ity fikafika ity
IOS 7 amin'ny iPhone 4 namerina sy namboarina ho vaovao, mandeha tsara, toy ny iOS 6. Tsy azoko ireo olona milaza fa mahafaty izany.
Ny ahy dia izao, diso: /, araka ny voalaza etsy ambony ao amin'ny tantara
Nanjary fisarahana ny ahy, miadana be ny fihetsiky ny roul, indraindray mihetsika miadana izy fa tsy miodina dia tsindrio ny sary dia mila miverina amin'ny roul ianao, ok, ny iphone-ko 4, tsy maintsy mankany amin'ny 5 aho fa maninona no paoma mandefa fanavaozana amin'ny solosaina tsy manohana azy? manery antsika hanary ny fitaovana ??
faniry dia hoy izy:
Tsy ilaina? Izay irery ve dia efa tsy ilaina intsony? Fa zavatra inona! Ankehitriny dia tsy ilaina izany noho ny keyboard na toy ny lahatsoratr'ilay lehilahy hafa fa ny iPhone 5 dia efa ambanin-javatra kely, mandalo izy ireo!
Valiny amin'ny tsy ilaina
Mety tsy ilaina izany raha maharitra iray minitra vao manoratra fehezanteny iray izay misy litera 12 fotsiny. Fahombiazana io na eo aza ny zava-misy fa toa tsy azo atao ny manana azy ireo.
drevil dia hoy izy:
Manana iPhone 4 aho ary ny hany zavatra hitako izay mandeha miadana dia ny fampiharana Reminders. Maty afaka miasa haingana. Tsy maintsy nametraka Calendars 5 aho, izay tena mety amiko.
Mamaly an'i drevil
Izaho dia manana an'io olana io ihany amin'ny keyboard kely miadana, eo amin'ny ipod touch 5G (ios 7) saingy manana ny safidy nolazain'izy ireo momba ny iclound kilemaina ao aminy aho, ahoana no hamahako azy? Mety ho ny mifanohitra amin'izay ve no hampavitrika azy? mba ampio!
Hbs dia hoy izy:
Tompokolahy, raha mandeha miadana izy dia avereno ary apetraho toy ny iPhone vaovao. Saika hamaha ny olana rehetra izao. Nataoko in-2 tamin'ny iPhone 5 nataoko ary mandeha tsara izany
Valiny ho an'i Hbs
notary dia hoy izy:
Raha apetrako ho toy ny iPhone vaovao izy io, azoko atao ve ny misintona ny fifandraisana amin'ny iCloud mora foana?
Mamaly ny notary
tsy maintsy nanao an'io tamin'ny iphone 5 ve ianao ?? Noheveriko fa io olana io dia ny antsika izay manana iPhone 4 fa tsy ny iray vaovao
Misy mahalala ve ny antony tsy ahazoako fampandrenesana ao amin'ny "centre d'exploitation" ??? Nampihetsika ny foibe fampandrenesana aho, ny hafatra, ny mailaka, ... ary tsy mivoaka ry zareo, iPhone 4, misaotra.
Izany no nanjo ahy androany tamin'ny LINE. Nivoatra ho iOS 7 aho omaly, ary tsapako tamin'ity tolakandro ity fa tsy tonga tany amiko ny fampandrenesana LINE. Na izany aza, tokony hanokatra LINE (tsy nanokatra azy io aho talohan'ny fanavaozana) ary nahazo ny hafatra aho. Avy eo nangataka ny handefasana ahy aho, nakatoko ny LINE avy amin'ny multitasking ary nanidy ny iPhone, ary tonga tamiko ireo fampandrenesana. Raha tsy mahomby ny zava-drehetra dia mety misy olana hafa 🙁
Manana 4s aho ary miadana ny fidirana SETTINGS, ary ao anatin'ny fikirana dia miadana ny hiditra amin'ireo safidy rehetra, efa manandrana mamerina sy manamboatra ho toy ny vaovao aho fa mbola mitoetra ihany: S
Valiny tamin'i JuanR
Salama Juan, mitovy toerana aminao ihany aho. Avereno ny iphone 4S ary tsy hitako fa niova ianao. Diso fanantenana aho
: Eny diso fanantenana koa aho, tsy azoko ny antony hitrangan'izany raha averiko amin'ny finday aloha ny telefaoniko. Ny zavatra ratsy indrindra dia ny tsy ahafahako mahazo olona manampy ahy, ianao no olona novakiako voalohany fa mitranga aminy koa izany
Mety amiko mihitsy izany
Omaly dia nanavao ny iPhone 4 nataoko tamin'ny alàlan'ny iTunes aho (nanavao aho, tsy namerina tamin'ny laoniny, izany dia tamin'ny zavatra rehetra efa nananako), ary tsy hitako ny fihemorana eo amin'ny fitendry na nanana olana. Marina fa somary latsaka kely kokoa noho ny iOS 6 izy io, saingy tsy zava-dehibe izany ary minoa ahy, raha ampitahaina amin'ny zava-nitranga tamin'ny iPhone 3G sy ny fanavaozana ny iOS 4 dia ity no voninahitra.
Ny fampiharana sasany dia miadana be ho ahy na tsy misokatra tsotra izao izy, ohatra hoe manana Fing aho ary tsy misokatra, manana WhatsApp aho ary miadana sy mikorontana izy, manana iPhone 4 16gb an'ny voalohany aho any Espana, tafaverina amin'ny laoniny vaovao , arahabaona.
Pauly dia hoy izy:
Misaotra, niasa ho ahy ity fikafika ity… niadana be ny fitendry iPhone, nanoratra aho ary niseho tokony ho 6 segondra aorian'ny zava-drehetra !!!
fa izao voavaha ... misaotra!
Valiny tamin'i Pauly
yiyi dia hoy izy:
zavatra mitovy amiko no nitranga 🙁
Valio i yiyi
James. dia hoy izy:
Miadana be izy mandeha ...
Tsikaritra kokoa izany rehefa nampiasa ny iPhone 4s ianao (ho an'ny olona rehetra manome toky fa «ara-dalàna)
Mamaly an'i Jaime.
Misaotra anao!! Nanampy ahy be ny torohevitrao satria sosotra sy diso fanantenana aho
jota dia hoy izy:
Nanana an'io olana io aho, voavaha tamin'ity 'fika' tsotra ity!
Mamaly an'i jota
Apple dia manana politikam-pahamatorana tena mahery setra ary voarindra. Ny fitaovan'izy ireo rehetra dia mijanona ho ilaina amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa aloha, raha mbola manana ny fampiasa. Tsy mamela azy ireo amin'ny fanjakana ahafahanao mijanona amin'izay ataony, tsia, farany mavesatra sy tsy misy ilana azy ireo ianao ka terena ianao hividy vaovao. Fa maninona no esoriny ny mety hitazonana ny kinova farany an'ny fampiharana izay mandeha amin'ny terminal anao, ary manavao azy ireo na dia milaza aminao aza izy fa tsy azonao ampiasaina amin'ny iô intsony?
Tandremo, mpampiasa Apple aho nandritra ny 19 taona.
Leish dia hoy izy:
Nahita vahaolana aho, raha ny tena izy dia mieritreritra aho fa io no vahaolana tsara indrindra azo atao amin'ny iPhone 4, izay tsy iza fa ny mivarotra azy io faran'izay haingana ary manavao ny terminal, na amin'ny iPhone 4S na amin'ny fifaninanana rehetra. izay manome fahafaham-po ny filàna amin'izao fotoana izao izay tsy iza fa ny fahafahana manokatra WhatsApp amin'ny fomba mendrika, misokatra na mihidy rindranasa tsy misy fianjerana na lagoka, sns. Satria ireo olana rehetra atolotra ny vahaolana ireo, satria tsy hamboarina amin'ny iOS 7.0.1 na ronono hafahafa izy ireo. Ny tadiavin'i Apple dia ny fanesorana ny iPhone 4 faran'izay haingana, tokony ho hitanao fotsiny fa hanohy hanohana ny terminal mandritra ny taona mampalahelo iray fanampiny izy.
Noho izany, ny vahaolana, avy eo amidio ary avereno ny ampahany amin'ny fandaniana ampanjariam-bola. Manohitra aloha kokoa, satria amin'ny herintaona dia kely ny vidiny ary raha tsy izany dia ho hitanao.
Valio amin'i Leish
juanmamo dia hoy izy:
Miarahaba anao amin'ny fanampiana. Miasa izao.
Mamaly an'i juanmamo
Misaotra anao!!!!!!!!!! ny keyboard-ko dia naharitra 15 segondra isaky ny teny, tena misaotra ny vaovao, andro 2 nandalo izay namoizana ain-doza !!!
David salguero dia hoy izy:
Manana Iphone 4 aho ary miaraka amin'ilay fanavaozana dia diso fanantenana aho, saingy amin'ity fikafika ity dia mety amiko izy io.
Misaotra amin'ny fanampiana !!
Valiny tamin'i David Salguero
Sammy dia hoy izy:
Miadana ny iPhone 4-ko ary mihena be ny volan'ny ringer amin'ny iOS 7, fahadisoam-panantenana inona 🙁
Mamaly an'i sammy
jvc55555. dia hoy izy:
Ianareo izay manana iPhone4 dia tsy mieritreritra ny handeha any IOS7 akory, fa ny iPhone no ampandoaviny vola ary tsy misy fomba hiverenana intsony… mandehana Apple shit… Ahoana no hataon'izy ireo aminay amin'ny vidin'ny iPhone ?? ? very saina. Tsy hividy na inona na inona amin'i Apple intsony aho raha tsy hoe voavahan'izy ireo izany, raharaha mahamenatra izany.
Valiny amin'ny jvc55555.
Niala tamin'ny iOS 5.1 ka hatrany amin'ny iOS 7.04 aho ary tena faly manome soso-kevitra azy io, amin'izao fotoana izao dia tsy jailbreak aho ary maharitra kokoa ny bateria noho ny nanolorako azy teo aloha. Ianareo izay manao ratsy, efa namerina azy io ve ianao ary nahazo ny backup?
sebastian aguirre dia hoy izy:
Mampalahelo fa ny fitaovana Apple dia nijanona hatry ny ela ho milina nahavita be tamin'ny taona lasa, ankehitriny ny orinasa dia mikendry ny hamokatra fitaovana ho an'ny fampiasana an-trano sy fialamboly mifantoka amin'ny mpihaino ankizy sy tanora sy mpikarakara tokantrano (tsy manambany olona). Na eo aza izany dia mbola manohy mivarotra ilay sarin'ny "famokarana avo lenta" izy, mamitaka antsika rehetra izay mihevitra fa manana ekipa mety hiara-miasa isika.
Amin'ity lafiny ity, ahoana no ahafahan'ny Samsung amin'ny taona mitovy ary misy fampiharana mitovy amin'izany dia haingana kokoa noho ny iPhone 4 ary ahoana no ahafahan'ny Macbook miraikitra amin'ny maodely 3d izay tantanan'ny PC manetri-tena nefa tsy misy olana. Raha ny amiko, efa ela aho no nifindra monina tamin'ny PC noho ny vidin'ny mac sy ny fahaizany ambany amin'ny rindrambaiko maritrano ary toa tsy manana fahafaha-mivezivezy amin'ny android intsony aho, heveriko fa nanao linux sy google asa tsara kokoa noho Apple amin'ny rafitry ny findainao.
Miorina amin'izany dia heveriko fa ny iPhone dia manaraka ny làlana mitovy amin'ny Blackberry, lasa fahatsiarovana lany andro fotsiny!
Mamaly an'i sebastian aguirre
Tokony ho ao anaty fahatsiarovanao ny iphone 4 tsy misy fako fotsiny ho fahatsiarovana anao, ny iray aminareo dia mety manana an-taonany maro ny fambolena rakitra junk nanampy ny fanavaozana izay ananantsika rehetra. Ny iphone4 dia fitaovana LUXURY miresaka teknolojia, ambony lavitra noho ny ip5 !! Raha ireo efa miandry ny ip6 dia efa tokony hahafantatra fa tsy inona izany fa ny ip5 miaraka amina fampiharana manokana mandritra ny 4 taona alohan'ny handehanany amin'ny fifaninanana, andro hafa hiresahantsika momba ny ip4 anao afaka manao zavatra maro hafa noho ny tena zava-misy nampitomboina , TANDREMO io, dia mbola manan-kery io!
Mamaly an'i Chester
Gorr dia hoy izy:
Misy manampy ahy ?!
Nividy ny iPhone 4s -n'ny Internet aho androany dia efa ananako io ary te-misintona tambajotra sosialy aho ary mivoaka miandry ahy .. Ary tsy mavesatra velively ny nataoko fa 5. Ora toy izany ary tsy misintona olona manome ahy izy ireo torohevitra sa ny internet sa inona no ataoko?
Mamaly an'i Gorr
Ana Carina Torres dia hoy izy:
Manana ny iphone 5.5 aho ary tsy afaka mihetsika ambony na midina izay eo amin'ny efijery. Mijanona ho static fotsiny ny écran. Inona no tokony hataoko? MISAOTRA
Valiny tamin'i Ana Carina Torres